New Galaxy S7 iyo S7 Edge, inbadan oo lamid ah | Wararka IPhone
New Galaxy S7 iyo S7 Edge, inbadan oo isku mid ah
Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan cadeeyo inaan ahay qof jecel inaan tijaabiyo taleefannada casriga ah, sidaas darteed Kaliya kuma koobna iPhone sida qalabka kaliya. Markii Samsung ay soo bandhigtay Galaxy S6 iyo S6 Edge, isticmaaleyaashu waxay awoodeen inay arkaan sida ay Kuuriyaanku ahaayeen, ugu dambeyntii wadada saxda ah. Ma iibin kartid mobayl dhan 700 oo euro oo ku dhammeysan baco.
Samsung Galaxy S7 cusub iyo Galaxy S7 Edge, oo dadka Kuuriya ay ku soo bandhigeen MWC oo berri si rasmi ah uga bilaabmi doonta magaalada Barcelona, waxay na tuseen qalab ka nadiifsan qaabkoodii hore, halkaasoo kaameradda gadaal wax yar ka soo baxeyso, booska micro-SD-ka ayaa lagu daray, waa biyo-la’aan waxayna leedahay kaamiro cusub.
Galaxy S7-kan cusub wuxuu la yimaadaa Android 6.0 Marshmallow, oo leh laba processor oo afar geesle ah oo kala ah 2,15 GHz iyo 1,6 GHz. waxaa maamula Eynos 8890 (oo ay soosaartay Samsung) leh qaboojiye dareere ah sida Lumia 950 iyo 950 XL cusub oo ka socda Microsoft. Kaamirada dambe waxay na siineysaa 12 megapixels oo leh teknoolojiyada Dual Pixel. Batariga waa 3.000 Mah oo si xawli ah u shaqeynaya.
Kaamirada leh Teknolojiyada Duel Pixel waa mid ka mid ah riwaayadaha ugubka ah in aan ka helno cusboonaysiinta moodooyinka Samsung S6. Kuuriyaanka ayaa dhinac iska dhigay dagaalka si ay u bixiyaan tirada ugu badan ee pixels si ay u bixiyaan tayo gaar ah oo xallin yar leh. Tikniyoolajiyadda 'Dual Pixel' waxay noo oggolaaneysaa inaan soo qabanno 1,4 um pixels oo na siiya dhalaal illaa 95% ka sarreeya. Intaas waxaa sii dheer, dareemayaasha isku dhafan ee cusub waxay na siinayaan furitaan ah 1,7, sidaa darteed sawirada aan ku qaadno iftiin yar waxay bixin doonaan natiijooyin wanaagsan.
Samsung waxay dooneysay inay diirada saarto bixinta dhabta ah geeska sida quruxda badan ay u saxsan tahay waxay ku jirtaa qaabka loo yaqaan 'Edge model', laakiin taasi run ahaantii waa wax aan faa'iido lahayn. Kuuriyaanka waxay ku siinayaan moodeelkan cusub barnaamij gaar ah si aan ugu adeegsan karno cirifka, laakiin ilaa asxaabteena Actualidad Gadget, ha sameyn dib u eegis dhameystiran, ma awoodi doonno inaan ku siino faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan.
Labada noocba waxay suuqa soo gali doonaan 11-ka Maarso. Qaabka S7 ayaa laga heli doonaa 719 euro halka nooca S7 Edge uu ka bilaaban doono 819 euro. Si aad isugu daydo inaad dhiirrigeliso iibinta moodelladan cusub, Samsung waxay leedahay waxay siineysaa Gear VR dhammaan kuwa sameeya booska qalabkan ka hor intaadan iibin.
Maqaalkan iskuma dayayo inaan dhaleeceeyo Samsung, laakiin waxaan ku soo bandhigayaa aragtidayda ku saabsan sheekooyinka cusub ee sumaddu ku soo bandhigtay cusboonaysiinta macquulka ah ee S6. Iyadoo ay run tahay inaan helnay processor cusub iyo kamarad cusub, Samsung ma aysan soo bandhigin astaamo waaweyn sida Apple ay ku sameysay furitaanka iphone 6s iyo 3D Touch technology, tusaale ahaan. Sidoo kale waa run in, mararka qaarkood, Apple ay soo saartay moodallo cusub oo aad u yar oo ugub ah marka loo eego qaabkii hore. Way cadahay in sanadkasta aanad wax cusub abuuri karin sida isticmaaleyaashu jeclaan lahaayeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » New Galaxy S7 iyo S7 Edge, inbadan oo isku mid ah
Waan kugu raacsanahay adiga maqaal aad u xun oo kaliya waxa ku qoran in la isku dayo in la iibiyo iyo cinwaanka qoraalka, si ay wax uga qoraan noocyo kale haddii ay khalad sameyn doonaan, naftaada u hibee inaad ka hadasho Apple waana taas laakiin tan iyo halkaas wax cusub maahan inaad ka hadasho tartan Xun, maxaad kale oo aad dooneysaa haddii aan wax cusub la soo saarin, in taleefanka gacantu kuu soo baxo si ay subaxa quraac kaaga dhigto? Wuxuu ku amaanay isaga inuusan xoog saarin shaashadiisa, waxaan qiyaasayaa faallooyinka
Afkaaga waalan xidho, ma ogid waxa aad ka hadlayso Diego
Aamusi aaminaad run ah
Waa sax in laga hadlo tartanka (haddii Samsung aysan afkiisa ka saareyn Apple, maxay kuwa Apple ka jecel ka hadli karin?) Hagaag, waa hubaal waa markii iigu horreysay ee aan ku arko taleefanka gacanta Samsung. waxay soo bandhigeysaa wax badan oo isku mid ah (haye, sidaan xusuusto inta jeer ee Apple ka cawday inay had iyo jeer isku mid tahay oo isku mid tahay. Hadhow hadalka wuu dhacayaa ...) waa in la yiraahdaa lana aqoonsadaa in koox aad u fiican sida s6 ay wax badan u baahnaayeen. si loo hagaajiyo gurigeeda, xaqiiqdii waxay ahayd, feker ahaanteyda "s7" wax kale ma ahan oo waa "hagaagsan" nooca s6 iyada oo aan wax xiise leh lahayn. Iyagu ma aysan doonaynin inay khatar geliyaan waxaanan u maleynayaa inay iyagu sugi doonaan inay arkaan waxa ay ka heli karaan iPhone 7 si ay fikrado u helaan Runti runti wali si weyn ayaan ugu faraxsanahay 6-yadeyda waxaanan sugayaa 7-da taas oo aan hubo inay ku celin doonto jabinta diiwaanka iibka.
Faallooyinka fa'iidada yar ee halkan ku yaal, waan ku raacsanahay, fiiri sida kuwa yidhi megapixels ka badan ka fiicnaadeen ay hada u aamusan yihiin, maxaa yeelay waxaa sameeyay Samsung iyo 300 oo shirkadood oo dheeraad ah, hadda waxay yareeyaan megapixels ee ma ahan qaylo dhaan ... in ay dhaleeceeyeen Apple Sida iska cad xad ayaa jira, ma ahan isla 5 mpx ilaa 12mpx, laakiin ma ahan muuqaalka ugu weyn ee kamarad ka fog.
Waxaa jira waxyaabo s6 ay si fudud u iibin karto, iyada oo aaminsan lafteeda hal abuur ama kacaan laakiin aysan ku soo kordhinaynin wax cusub, waxay si fudud ugu dhejiyeen si liiska waxyaabaha cusub ay u dheeraadaan oo ay u sii iibiyaan wax ka badan, wax aysan Apple sameynin, ii sheeg taleefanka gacanta ee u baahan qaboojiyaha Fadlan xalli, in haddii ay mudan tahay in la dhigo nidaamka hi, laakiin haddii Apple aysan sameynin ama cid kale, taasi macnaheedu maahan inay tahay mid cusub, laakiin maxaa yeelay ma bixiso wax shaqo ah ama faa'iido ah , si fudud uma ahayn lagama maarmaan, moobilku maahan ciyaar kumbuyuutareed ama wax la mid ah, iyo waxtarka hawl-wadeennada ugu dambeeya ay helayaan, marba marka ka dambeysa ayay kululaanayaan marwalba, tani waa wax aan horeyba kuugu sheegay inay ka saari doonaan dhawr sano gudahood maxaa yeelay dareeraha qaboojinta ayaa gabi ahaanba waxba qaban.
Lacag-bixinta wireless-ka ah waxbadan nama siineyso haddii aan ku sii wadayno ka-tagitaanka moobilka meel go'an oo aan lacag ka qaadno, kani waa Samsung, Apple waxay leedahay fikir aad u kala duwan maalin walbana waan ku faraxsanahay, weli waxaan u maleynayaa in iPhone 7 uu noqo diiwaanka nasashada, waxayna noqon doontaa mobilada ugu fiican sanadka. Sannadka dambe waxaan arki doonnaa naqshad cusub oo loo yaqaan 'galaxy' oo laga soo guuriyey iphone-ka.
Kani waa gacaliyahay, i rumee, waxaan ahay mid ka mid ah kuwa had iyo jeer aqbala wanaagga Samsung soo saarto oo ku canaantaan iPhone-keyga meel walba (lacagta degdegga ah, labada gees ee shaashadda ah ... Mm the double Edge iyo .. Ah the double Edge sidoo kale, haha ​​waxaan u maleynayaa inay aheyd waxa kaliya ee aan jeclahay, wax kasta oo kale si caaqibo leh ayaa looga soo guuriyey dhammaan noocyada) hubaal lacag-bixinta wireless-ka ah waxay ila tahay aniga wali waana sii wadi doontaa inay noqoto mid aan isku xirayo haddii aan lacagtu ka bixin meel ka dhigid. Arrinta kamaradda, haa, hadda ma kula heshiin doonaan Apple? Sida iska cad maahan, dhamaan kuwa ku mashquulsan megpixels waxay ugu dambeyntii fahmi doonaan in nambarkan uusan halkan ku xirneyn (yaa la khiyaaneeyey?), Waxaan u maleynayaa in halkaan waxa kaliya ee igu kalifaya inaan ka xumaado Apple ay tahay inaysan runti cusbooneysiinin muuqaalka, qeybta kore ee retina Aniga aragtidayda waxay ubaahantahay riixitaan ah 4K maxaa yeelay macquul maahan in ciidanka 4K ay tahay in gurigeyga laga dhex arko shaashadda markii ay aad ugafiicnaan laheyd in si sax ah looga arko duubista. Wax kasta oo kale iPhone wali wuu ka sarreeyaa.
Weli waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay, Samsung ma dooneynin inay qatar gasho oo waxay sameysay xishood badan, way ka sii fiicnaan laheyd. Sikastaba, waxaan ka imid Xusuusta Xusuusta, waxaan rajeyn doonaa in Xusuusta 5 ay na keento.
Actualityiphone? Ama cusbooneysiinta Android? Waan wareeray
Ku jawaab Hgg
Maaddaama ay halkan ka yiraahdaan: "Dhadhan ahaan, midabbo."
Waan ku raacsanahay laakiin, markaa, u qoondeynta maqaal dhammaystiran terminaalka tartame, waxay ila tahay inaanay bixinayn
Haddii Samsung aysan ka saarin Apple afkiisa, waxay u noqon doontaa wax (xaasidnimo iyo walwal isku waqti ah). In iyaga iyo qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaashoodu u foorarsadaan sidii ay ugu cabirayaan sidan micnaheedu maahan inaan sidoo kale u sameyno aargudasho.
Doqon ma ihi inaan hoos u dhaco sida iyaga oo kale, fudud.
Maqaal, fariin qoraal ah, isku mid ah ayaa ah, warkan wuxuu u qalmaa halkaan sababtoo ah wixii lagu sheegay shir aan horay u dhigay, waxaan u maleynayaa in aynaan ciriiri gelin, laakiin halkii lagala socodsiin lahaa tartanka, oo aan falanqeyno dhaqdhaqaaqooda
Waxaan u maleynayaa in faalladaada ay khaldan tahay, uma maleynayo in midkeen naga mid ah uu ku xanaaqayo. Ma aqaano haddii aad taqaanno waxa "trolling" macnaheedu yahay, halkan laga bilaabo maqaalka Per se ilaa faallooyinka waxaan kaliya arkay fikradaha, aad uga duwan troll, taas oo aan ka badnayn jees jees. Hoos u deg Anigu waxaan ahay raaca aamin ah Apple, laakiin sidoo kale waan ixtiraamayaa Kuuriya, ma jiraan wax hooseeya sumaddaas. Runtii saaxiib waxaad aragti qaldan ka haysataa wax walba. Salaan iyo akhri mar kale a to z dhammaan faallooyinka
Maxaa aan quusin karin? Wax fikrad ah kama lihid waxa ip68 uu yahay sabool fanboy
Ignacio Sala ayaa ku soo dhex dhuuntay halkaas,
Kahortaga ip68 kaliya uma ogolaanayo carqalad buuxda oo qoto dheer laakiin wuxuu ka badnaan karaa nus saac ka hooseeya.
Hadda waa ilaalinta ugu sareysa suuqa.
Xoogaa qalafsanaan fadlan.
Ku jawaab pacoflo
Qof kasta oo ka fikiraya terminal tartame waa weyn yahay !!!, Waxay umuuqataa inay saami ku leeyihiin Apple, aniga waxaa ila fiican inay sameeyaan falanqaynta noocan ah marwalba waan taageersanahay in shirkadaha ay bateriga dhigaan si ay u helaan qalab kafiican, ugu dambeyn in kuwa guuleystaa ay yihiin macaamiisha, waxa lagama maarmaanka ah ayaa ah in qiimahooda hoos loo dhigo maxaa yeelay iyagu waa kuwo xaaraan ah oo la buunbuuniyey.
Juno 7633 dijo
Dabcan waa quusin karo.
Micro SD, biraha iyo naqshadeynta muraayadaha, iska caabbinta biyaha, kamarada hagaagsan ee ugufiican sanadka 2015, waxqabadka, 1000 milliamps ka badan, muraayadaha dhinaceeda hoos loo dhigay qeyb ahaan wali biyo ahaansho iyo ergonomik badan maadama galaaska qalooca gadaashiisa, maxaad intaa ka badan aad rabtaa Waa taleefanka saxda ah ee aad ku qaadan karto meel kasta oo aad rabto batteriguna wuxuu sii socon doonaa waqti aad u dheer marka laga reebo biyo diidmada.
Imisa jeer ayaad ku celisay sheyga u adkaysta biyaha? Kaliya intaas maahan, ee waxaa lagu quusin karaa shahaadadaas.
Waan ku celinayaa maxaa yeelay waa astaanta kaliya ee aan u hurin nashqada ama looxyada in la dhigo IP68
badan oo isku mid ah?
Hagaag, fiiri iPhone muddo aad u dheer ku dhowaad isla moodooyin isku mid ah oo qeexitaanno isku mid ah leh, kaliya isbeddelka ugu daran ayaa ahaa inji oo ah shaashadda iyo tan dadka ka cabanayay sannado badan ... laakiin fanboy wax badan ayuu qaban karaa!
Waxaad sidoo kale dhihi kartaa isla wixii ku saabsan HTC Sony iwm ... laakiin kaliya ma ahan Samsung ... dabcan ajajjaajjaja
markaad wax ku dhaliisho waxay noqon doontaa ... fiiri!
Marka hore ... IXTIRAAR LA'AAN bogga, tifaftirayaasha iyo adeegsadayaasha ...
Arrinta labaad ... Waa inaan qiraa in Samsung ay shaqo wanaagsan qabato laakiin qaboojinta dareeraha ... Ma loo baahnaa? Waligey waan la joogay Apple laakiin ma aqaano ... marwalba waa isku mid aniga. ..
Qaar waxay dhahaan IPhone wuxuu ubaahanyahay 4K laakiin waad ogtahay waxa ku nuugaya ALLE, taas oo lamid ah sida Porche Panamera oo kutaala Madrid 19:00 pm waa god madoow fadlan ... taasi waa sababta Samsung ay u dhigto batteriga, ram ka badan, processor ka badan. dhaqaajinta dhamaan midabadaas muuqda ... iphone-ka oo wata retina waa sax ... waxaan rabaa mobilada 4-ta ah inuu soconayo 6 saacadood ... Taas waxaan u hayaa Samsung 4K TV oo waxaan ku fiiriyaa halkaas .... kaamirada si fiican ayaan uga arkaa Samsung s7 ugu dambayntii way aqoonsadeen !!
Si daacadnimo ah s7 waa muuqaal qurux badan kuhadlaya ... warku waa xanuun badan yahay marka loo eego s6 ....
Si aad u dhadhamiso midabada ... laakiin waan sii wadi doonaa iPhone 6-keeda ilaa ay sii daayaan 7-da
Taasi haday Ixtiraamto YAR YAR OO AAN WAXBA QUUSAN !!
Uma baahnid 4k laakiin haddii 1080 ama 2k, iPhone-ka xallintiisu uusan sii socon batteriga oo aad uga dheer kan kale oo isku mid ah, Samsung wuxuu yaqaanay sida loo isticmaalo shaashadda laba jeer xallinta iPhone-ka iyo batteriga oo socda isku mid ah ama ka badan. Aan ku xuso, Galaxy wuxuu leeyahay astaamo badan wuxuuna ku siiyaa waxyaabo badan oo ku saabsan iPhone.
Waxaan hayaa saaxiibo badan oo haysta Samsung galaxy s6 iyo s6 edge waxayna dhahaan batteriga wuxuu soconayaa ugu badnaan 12 saacadood oo isticmaalka caadiga ah, iyadoo iPhonekeyga aan si fiican u gaarayo saacadaha 10-12 ee isticmaalka ...
Ogowna in asxaabteydu ay yihiin taageerayaasha Samsung ayna garwaaqsanyihiin inaan ubaahanahay inaan dhigno 2K ama 4K mobiil maxaa yeelay kuma arki kartid isha qaawan ... wax yar uun dhalaal iyo midab badan ... laakiin sidaan idhi, taasi waa waxa telefishanka loogu talagalay ...
Waxa aniga iga yaabiyay ayaa ah in iPhone 6s batteriga ka yar ku sii jiro isla iPhone 6 halkaas ma garanayo sababta ay noqon doonto laakiin Apple shaqo fiican ayey qabatay ...
Dhadhan kasta midabada laakiin looma baahna in la dhigo waxa kaliya ee moodada ah… BUAAAH Waxaan haystaa mobilka 4K… .. Iyo?
Xaqiiqda ah inay fursado badan haysato waa run laakiin nidaamka qalliinka awgiis mooyee mooyee (shaashadda qalooca ee geeska aan runta ka hadalno, waa qabow laakiin waa dibin daabyo ... midabbada way fiican yihiin markay ku soo wacaan ... laakiin taasi miyey leedahay adeeg kale? Sida 3D Touch, isticmaal kasta? ... aad bay u cagaaran tahay ... laakiin haye.
Shaashadaha waaweyn… Aniga ma aqaano durba waa wax la yaab leh in la maareeyo iPhone 6 Plus… bal qiyaas 6 ″….
Xushmadda aan u leeyahay cayda ma aha sheyga ... hahahahaha.
Laakiin kaalay waan aqoonsanahay inay sameeyeen Mobilo wanaagsan ... waxa wanaagsan ee aan haysto ayaa ah inaan aqbalay labada madal (waxaan ahay labada iOS, android, windowssphone iyo ubuntuphone), sidoo kale kombiyuutarada, Linux (ubuntu, cas cas, symbian), OS X, Windows!
Aniguna waan qaddaray labadaba faa'iidooyinka iyo khasaaraha, laakiin aniga macruufka iyo OS X ayaa ugu fiican shaqada, Windows inuu ciyaaro iyo Linux si loo horumariyo iyo server.
Marka salaan iyo isku duubni!
Rafael… IPhone wuxuu dhigayaa xalka 4K waxaadna aadi kartaa inaad iibsato batari banaanka ah maxaa yeelay moobilku ma socdo 4 saacadood!
Waxay horeyba ula socotaa qaraarka ay leedahay oo arag inta batterigu socdo!
markaa wax kale, dadku ma rabaan wax ay leeyihiin Sony Htc ama Samsung oo leh wax yar ,,, laakiin markii Apple ay ku darto iyaga, waad ka xumaanaysaa xitaa waad ku faanaysaa sida ilmaha aabihiis hadiyado badan ugu iibsado ….
ilaahay oo dhan wuxuu dhaleeceeyaa cabirka shaashadda kumanaan kumbuyuutaro ah ... oo markuu tufaaxu weyneeyo shaashadeeda iyo cabirkeeda iyo dhammaan carrabkooda dameerka? buahhh !!
Iyagu maahan arrin ixtiraam leh, inbadan waxaan oran lahaa anshaxa….
Qaboojinta dareeraha ayaa halkaan lagu sii joogayaa?
Skype loogu talagalay ipadku wuxuu oggol yahay wicitaannada fiidiyowga kooxo ilaa 25 qof ah